DAAWO SAWIRADA: HADDAANAN LA ISU NAXARIISAN MIYAA RAXMED EEBE LAHELEYAA – idalenews.com
DAAWO SAWIRADA: HADDAANAN LA ISU NAXARIISAN MIYAA RAXMED EEBE LAHELEYAA
Baydhaba:Waxaan maanta barkhadii soo booqdey kaamka Buulo-uusley oo ka tirsan DedmadaBaydhabo kuna yaala meel u dhow kawaankii hore ee xoolaha lagu qali jirey (kawanduureed),halkaas oo ay degaan u ahan jirtey beel somaliyeed oo caanku ahayd Ugaarsiga .
Hadaba waxaa idira kaamka igu soo dhoweyey Isaq Barre Maxamed oo ah odeyga kaamka siduu isheegey kadibna waxaa uu igawaramey xaladooda guud ay ku sugan yhiin wuxuuna yiri:
Waxaanu ku nool nahay nolol adag aanan cabiri karin waxayna inagu qabatey walal la’aan waayo somalia wey isu gurman jirtey waxayna si hoose oo aan lageyn reerka walaalkooda u kormeeri jireen in wax nolo ah u haysto haduunan haysana xaaska ayaa loo dhiibi jirey si hoose ah ,balse anaga toos iyo dadbanaanba waanu ku adbanahay.
Mudane Isaaq waxaa kaloo u sheegey in hay’adaha aan Dowliga ahayn ka yimadeen dibada iyo gudahaba weyna sasawirtaan mamar ayaa waxaa horteena lakeena gawaari badan oo rashiin saran safka ayaa lana gelshaa labatanka qof ugu horeya marka lagu sawiro iyagoo qadanaya inta kale anagoo firineyna ayaa dir loo celiyaa rashiinkii aragti uun baan ku cunaa badiyaa.
Tusaale ahaan baydhabo kaamam badan ayaa ka furan sida Xanaano1 iyo 2 waa reer Fardheer xataa koronto ayaa Bushashkooda ku jirta waxay heleen walaal u hiiliya dhab ahaantii iyaga shaqadoodu waxay ahayd Beeraley wax ka hor isaagan majiro nolol ka dhow ayay heleen caruurtoodana waxbarasho lacag la’aan ah ayay heystaan.
Anagana saad ogsoontahay waxaanu ahayn ama shaqadeenu tahay Ugaarsato subaxdii hore ayaan qaraab aadi jirney Sheekh Casharo,Gurigaab iyo Habardooy ayaan kasoo qaraban jirney sacarkiina carurtena ayaan lajoogney ,hadase Ugaartii meelwalba beer ayaa laga sameystey markaan raadino waa labahabeen ilaa sedax habeen ayaan ku maqnaana markaa Sagaaradii hadaan soo qalnana waa xaran horteyda kuma qalin Baqti baad wada ka ibsanmaayo ayaa ina hortaala.
Mudane Isaaq waxaa kaloo uu isheegey in kaamkan ay ku jirto 79 qoys oo aanan lagu dhex arkeynin weyn iyo yar wax farsomaali qora ama akhriya tuseela ahaan walaalkeyga Yemen degan hadduu waraaq iisoo diro magalda gudaheeda ayaan la adayaa si laigu soo aqriyo.
Isaaq isagoo ilmaynaya aniga abahay Shabaqa sida loo dabo iyo kabo tolid ayuu ibarey caruurteyda waa sedax wiil iyo sedax gabrood wiilasha labo kabaha ayay caseeyan midka weyna anuu kabaha ila tolaa,gabdhahana xafadaha ayay waregaan si ay dhar dad ugu dhaqaan dholosha ayaa halkaasi ina dhigtey ayuu yiri Isaaq.
Hadaba walalayaal anoo isaaq suaalo inaan weydiiyo raba kana damqanaya Quursiga is dhinacdhigey ayaan iri maxaad is dhihi lahayd wax ugu muhiimsan aan u sheegi karro Somaali damiirleh iney idin qabtaan.
Amusnaan dheer ka dib waxaa uu yiri waxaan codsanayaa in Dugsi Quraan la inoo dhiso Macalinkana qarashkiisa lanaga dhiibo waa mid.
Midakale haddii aan nahay Muslim walaalo ah sida caruurtiina Skoolada aad u geysen mustaqbal wanaagsan ugu radineysaan fadlan kuwenana wey idin anfacayaan waxbarasho qarashkeeda midmid inooga kafala qada,anaguna Ilaahay baan idin baryeynaa wanaaga mustaqbalka caruurteena haddaad ka talisaan.
Ugu danbeyn dhamaan Muxsiinta Somaliyeed waxaan si bani’aadamnimada ku dheehan uga codsanaynaa walaalkeena Isaaq oo nolol mugdi ah dhexdabalanaya in loo hiilo si Alle Subxaana Watacala ahaa maalinta Khiyaamo inoogu gargaaro.
NB.Telefonkooda iyo nolosha dhabta ay hada jogaan fadlan sawirada ka dheeho.
Bashiir Maxamed Aden
Madaxweyne Xasan sheekh oo loogu baaqey inuu shirka ka socda baydhabo si deg deg ah u taageero.
Boqolaal ka tirsan Ciidanka cusub ee Dowladda oo maanta hubkooda la siiyay (Daawo Sawirada).